एकातिर पिकेटर्सको जबरजस्तीः अर्कोतिर सर्विस ब्रेकको त्रासः कालेबुङमा अस्पताल कर्मचारीहरू समस्यामा – खबरम्यागजिन
HomeBreaking Newsएकातिर पिकेटर्सको जबरजस्तीः अर्कोतिर सर्विस ब्रेकको त्रासः कालेबुङमा अस्पताल कर्मचारीहरू समस्यामा
एकातिर पिकेटर्सको जबरजस्तीः अर्कोतिर सर्विस ब्रेकको त्रासः कालेबुङमा अस्पताल कर्मचारीहरू समस्यामा
June 16, 2017 खबरम्यागजिन प्रतिनिधि Breaking News, कालेबुङ, मुख्य समाचार 0
कालेबुङः गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाका पिकेटर्सहरूले कालेबुङ जिल्ला अस्पतालका कर्मचारीहरूलाई एम्बुलेन्स रोकेर ओह्रालेर पैदल अस्पताल जान लगाएपछि आज २ सय ३६ जना कर्मचारीहरूले एसडीएमओ अङ्कन सिमलाङदीलाई ज्ञापन चडाएका छन्। ज्ञापन चढाएपछि कर्मचारीहरूको पक्षमा सोनाम छोडेनले कर्मचारीहरूलाई धेरै समस्या भइरहेको कारण नै आफूहरू यसरी ज्ञापन चढाउन बाध्य बनेको बताइन्।
“पहाडमा अनिश्चितकालिन बन्द डाकिएको भए पनि अस्पतालमा भने बिरामीहरू संख्या कम छैन। उनीहरूको सेवा गर्न हरेक कर्मचारीहरू अस्पताल आउनै पर्छ। तर एम्बुलेन्समा आफ्नो ड्यूटी आइरहेका अस्पतालका कर्मचारीहरूलाई पिकेटर्सहरूले रोकेर पैदल जान लगाइरहेका छन्। एकातिर ड्यूटी नआए सर्भिस ब्रेक हुने सरकारी आदेश अर्कोतिर पिकेटर्सहरूले ड्यूटी आउँदा पनि रोकिरहेका छन्। बीचमा हामीलाई धेरै असुविधा भएको कारण नै आज एसडीएमओलाई हामीले ज्ञापन बुझाएका हौं”, उनले भनिन्।
कर्मचारीहरूले बताएअनुसार एम्बुलेन्समा अस्पतालका कर्मचारीहरूलाई ड्यूटी ल्याउन अनि लैजान पार्टीगत ढङ्गमा मोर्चाका कालेबुङ जिल्ला अध्यक्ष डा आर. बी. भुजेलबाट लिखित अनुमति पत्र पनि लिइसकेको छ तर पनि पिकेटर्सहरूले एम्बुलेन्समा चडेर ड्यूटी आइरहेका तथा घर फर्किरहेका अस्पतालका कर्मचारीहरूलाई रोक्ने तथा ओह्राल्ने कार्य भने रोकिएको छैन।
आज बिहान पनि डम्बर चोकमा एम्बुलेन्स रोकेर अस्पतालका कर्मचारीहरूलाई गाडीबाट ओह्रालेर पैदल ड्यूटी जान लगाएको घट्ना भएको थियो। गत केही दिन अघि पनि कालेबुङ अस्पतालको एचडीयू वार्डमा नाइट ड्यूटी गरेर स्कूटीमा घर फर्किरहेकी एउटी ग्रुप डी महिला कर्मचारीलाई स्कुटी मेन रोडमा नै राखेर जबरजस्ती घर जान बाध्य बनाइएको थियो।
यस्ता घटनालाई लिएर गोजमुमो नेतवर्गले उचित निर्देश दिए पिकेटर्सहरूले अवश्य नै यस्ता कार्यमाथि रोक लगाउने थिए तथापि नेतृवर्गको उचित मार्ग निर्देशनको खाँचोको कारण नै घरि –घरि अस्पताल जस्तो अनिवार्य विभागका कर्मचारीहरूलाई पनि रोक्ने तथा पैदल ड्यूटी जान लगाउने कार्य भइरहेको छ।
बिरामीको प्राण जाँदा केही क्षण ढिलाइ भए सम्पूर्ण अस्पताललाई नै दोष्याउने मानिसहरूले अस्पतालका कर्मचारीहरू रोकेर पैदल हिँडाएर अस्पताल ड्यूटीमा पुऱ्याउँदा चाहि केही फरक पर्दैन? सोच्नपर्ने कुरा छ। अस्पतालका कर्मचारीहरूमा डाक्टरको जत्ति भूमिका छ त्यत्तिकै भूमिका अक्सिजन घिस्याएर ल्याउने ग्रुप डी स्टाफको पनि छ।
खरसाङ बिद्रोह फोटो फिचरसहित)
‘मुख्यमन्त्री पवन चाम्लिङले प्रधान मन्त्री मोदीलाई पत्र लेखुन्’